‘कथा काठमाडौँ’मा प्रियंकाको कामबासना, आयुषमानको जीवन ! « Ramailo छ
‘कथा काठमाडौँ’मा प्रियंकाको कामबासना, आयुषमानको जीवन !
छायाँकन सकिएको लामो समय पश्चात फिल्म ‘कथा काठमाडौँ’ले प्रदर्शन मिति तय गर्दै फस्टलूक पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ । यहिँ फिल्मको छायाँकन सेटबाट प्रियंका कार्की र आयुषमान देशराज जोशीको प्रेम मौलाएको थियो । अब फिल्म अशोज १२ गते रिलिज हुनेछ ।
यो फिल्म पश्चात प्रियंका र आयुषमानले थुप्रै म्युजिक भिडियो र केहि फिल्ममा सँगै अभिनय गरिसकेका छन् । प्रियंका र आयुषमान रियल जोडीको रुपमा ‘कथा काठमाडौँ’ले स्थापित गरेपनि रिलको कथामा उनीहरु जोडीको रुपमा नरहेको पोस्टरबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पोस्टरमा प्रियंका र अभिनेता प्रमोद अग्रहरीलाई एक बक्समा समेटिएको छ । यी दुईको बीचमा व्याप्त कामबासनाको भोक शाब्दिक रुपमा अर्थ्याईएको छ । त्यस्तै संजोग कोइराला र सन्ध्या केसीबीच प्रेम र आयुषमान/प्रेक्षा अधिकारी बीचको जीवनलाई देखाइएको छ । पोस्टरमा अनुमान लगाउँदा प्रेक्षा जीवनसँग लडिरहेकी छन् ।
संगीता श्रेष्ठले निर्देशन गरेको फिल्ममा काठमाडौँमा बस्ने बिभिन्न पात्रहरुको कथालाई उठाइएको छ । आहाना फिल्मस्को व्यानरमा ‘कथा काठमाडौँ’ विजय राईको लगानी छ । फिल्ममा लुजा श्रेष्ठको छायाँकन र मित्र गुरुङको सम्पादन छ ।